Aabbe Goobjoog Ka Noqday Dhimashada Xaaskiisa Iyo Carruurtiisa (Sheeko Naxdin Badan) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Aabbe Goobjoog Ka Noqday Dhimashada Xaaskiisa Iyo Carruurtiisa (Sheeko Naxdin Badan)
Aabbe Goobjoog Ka Noqday Dhimashada Xaaskiisa Iyo Carruurtiisa (Sheeko Naxdin Badan)
Waxa ay ahaayeen qoys wada dhan oo todobaadkii labaad ee fasaxa Iskuulka kujiray, hooyadooda ayaa la safartay, waxa aynna wateen gaari midabkiisu qallin yahay, kaas oo ay ugu tallagaleen in ay ku tagaan goobta safarkooda.
Hillinka wararka ee The Sun ayaa warreysatay Aabbaha carruurtaas oo isna goobjoog ka ahaa marka uu falka dhacayay, waxaana uu sheegay in uu sheedda ka daawanayay marka uu gaarigooda ku dhacayay gaariga kale.
Qoyskiisa waxa ay ugu maqnaayeen fasax Devon oo UK kamid ah, marka ay xaaskiisa ku dhufatay gaari xamuul ah, meel u dhaw Barnstaple arooortii hore saacadda gudaha marka ay ahayd 08:25 daqiiqo.
Xaaskiisa iyo hal cunug oo kamid ah carruurtiisa ayaa gaariga ku geeriyootay, halka kuwa kalana lagu qaaday diyaarad gurmadka deg degga ah, wakhti yar kaddibna gebi ahaan ba reerkaas waa ay geeriyoodayeen intoodii isbitaallka la dhigay.
Deegaan ahaan waxa ay degnaayeen agagaarka Milton Keynes, Koonfurta England, taliyaha booliska Richard McLellan ayaa sheegay in ay baaritaan dheer kujiraan aynna war sax ah soo saari doonaan marka ugu dambeysa sababta ka dambeysay geerida iyo dhimashada reerkaas farxadda ku bilawda maalintooda.
SI kastab aha ahaate Aabbahan ayaa qaracan aad daran darreemay, maadaama uu goobjooge ka ahaa dhimashada dhammaan reerkiisa, oo hal goob kuwada baxay.